कपिल शर्माकी ‘भुरी’ बोेल्डसिनका कारण चर्चामा – Nepali Digital Newspaper
रमेश एम.के.को रेड वाइनमा पल र साम्राज्ञी
बेलायतबाट बनेको ‘शून्य’मा प्रवासी नेपालीको पीडा
भारतीय सिरियलमार्फत् निरिषाको कमब्याक
सेलिब्रिटीमा सङ्क्रमण र कोरोनाको करामत !
‘अलिसासँग नाचौँ, पुरस्कार जितौँ’
कपिल शर्माकी ‘भुरी’ बोेल्डसिनका कारण चर्चामा
घटना र विचार, न्युज डेस्क !6months ago March 19, 2020
चर्चित टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’मा भुरीको भूमिका अभिनय गर्दै आएकी चर्चित अभिनेत्री सुमोना चटर्जीको चर्चा यतिबेला आकाशिएको छ । सुमोना यतिबेला आफ्नो बोल्ड लुकका कारण चर्चामा आएकी हुन् ।
सुमोनाले हालै समुद्रको किनारामा खिचिएका आफ्ना बोल्ड तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । ‘द कपिल शर्मा शो’मा साधारण देखिने सुमोनाले ‘टु पीस’मा खिचेका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेपछि उनी भाइरल बनेकी हुन् ।
‘कपिल शर्मा शो’मा सुमोना अर्थात् भूरीको अभिनयलाई प्राय सबै दर्शकहरुले मन पराउँछन् । सुमोनाको अभिनयसँगै उनको तोते बोली र सेक्सी ओठको चर्चा पनि त्यत्तिकै छ । अँझ बारम्बार कपिल शर्माले उनको ओठको चर्चा गर्दै दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिइरहेका हुन्छन् ।
यतिबेला कपिल शर्मा शोमा भूरीको भूमिका अभिनय गरिरहेकी सुमोना त्यो भन्दा पहिले ‘कमेडी नाइट विथ कपिल’मा मन्जुको नामबाट अभिनय गर्छिन् । दर्शकहरुले उनलाई सरला गुलाटीको नामबाट गरेको अभिनयलाई सर्वाधिक रुचाएका थिए ।